ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာနာယက ကျောင်းဆောင်မှာကျင်းပတဲ့ အဲဒီတောင်းပန်လျှောက်ထားပွဲမှာ ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ အလွန်တရာစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာ ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများဘက်မှာလည်း မကျွမ်းမကျင်၊ မသိ နားမလည်မှုတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ ဦးပဉ္ဇင်းများနဲ့ ကိုရင်တွေကို အစိုးရကိုယ်စား အလေးအနက် တောင်းပန်လျှောက်ထားပါကြောင်း သာသနာရေးဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဦးမြင့်မောင်က လျောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးရဲ့ လျောက်ထားတောင်းပန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်မြို့က စနေနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ဦးဓမ္မသိရိ က ဝန်ချတောင်းပန်ရမှာက ပြစ်မှုကျူးလွန်သောသူရယ်၊ ပစ်မိန့်ပေးတဲ့သူရယ်၊ ဒီနှစ်ဦးစလုံးက ခံရတဲ့သံဃာတော်တွေကို ကျေနပ်အောင်တောင်းပန်ရမယ့်ဟာကို ဦးဇင်းတို့က လိုချင်တာ၊ ဒါကို သံဃာမဟာနာယကတွေက ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ ဘာတစ်ခုမှတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ဖျန်ဖြေပေးခြင်း၊ အရေးယူပေးခြင်းကို သံဃာထုဘက်ကနေ ဘာတစ်ခုမှလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ဦးဇင်းတို့က ဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်တယ် လို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးက လျောက်ထားခဲ့ရာမှာတော့ လက်ပံတောင်းအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံရေးနားမလည်သေးတဲ့ ဦးပဉ္ဇင်းများနဲ့ ကိုရင်ငယ်တွေမှာ အပြစ်မရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်လိုတဲ့ နောက်ကွယ်က မသမာသူတွေရဲ့ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုကြောင့်သာ ဒီကိစ္စပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ခုပြောတဲ့ ဦးဇင်းက မဟန ဆရာတော်ကြီးတွေထက် သက်တော်၊ ၀ါတော်၊ အကျင့်၊သီလ သိက္ခာ ကြီးပါသလား။ ဆရာတော်ကြီးတွေက ပြောသင့်ပြောထိုက်တာ ပြောတာကို၊ သက်ကြီးဝါကြီး ဆရာတော်များ၏ သြ၀ါဒ ကို မထီမဲမြင်ပြုသည်ဟု ထင်ပါသည်။
လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးမှတောင်းပန်တဲ့ ကိစ္စကိုတော့မလုပ်သင့်ပါ။ တကယ်လုပ်တဲ့ သူတွေကဘယ်မှာလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင်က အမိန့် ပေးပြီး တခြားသူတွေကိုလွှဲချတာလာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆရာကြီးတွေကဘဲ နောက်ကနေလူမဆန်စွာ ခိုင်းနေတာလား၊ စဉ်းစားစရာတွေက အများကြီးဘဲဖြစ်နေတယ်။ ခုကိစ္စက အမှန်ပေါ်ဖို့လိုပါတယ်။
Why U Myint Mg say sorry to Cheif of Sanga.
These Cheif of Sanga were not victims.Actually U Thein Sein should go and see those victims of crack down and should look for their pardon otherwise what U Myint Mg did it nothing to count.
I never trust U Thein Sein.
Dec 11, 2012 03:56 AM